China Palmitoyl Tetrapeptide-7 factory na-emepụta | JYMed
Product aha: Palmitoyl tetrapeptide-7
Molekụla Formula: C34H62N8O7
Molekụla arọ: 694,919 g / mol
Ngwa: Relief nwere mbufụt nke anụ ahụ, na-anụ ike
Palmitoyl tetrapeptide-7 bụ ụdị sịntetik peptide compound nke na-agwakọta ọtụtụ n'agbụ nke amino asịd iji belata akpụkpọ mbufụt na ịdọkapụta akpụkpọ mebiri. Nke a peptide compound na-kweere na-akpali ndị imu nke collagen ozi ndị dị dermis site n'ime ka ụdị cellular ozi. Palmitoyl tetrapeptide-7 na-chere na dịkwuo ego nke hyaluronic acid ke ikpa, nke nwere ike inyere ikesiike akpụkpọ site adọta mmiri na epidermis. Ọ bụ ezie na chemical a na-ewere na-mma maka ojiji na nlekọta anụ, mgwa nwere ikike gbarie akpụkpọ ink pụrụ iduga akpụkpọ achagharị okwu. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-tinye ngwaahịa na palmitoyl tetrapeptide-7 gị nlekọta anụ ngwaahịa, na-eme otú nwayọọ nwayọọ, na ọkacha mma n'okpuru elekọta gị dematọlọjist.
Palmitoyl tetrapeptide-7 e weere a mma umi maka ojiji na ịchọ mma ngwaahịa ruru ya ike banye n'ime akpụkpọ ma napụta ọzọ mgbochi ịka nká Efrata miri n'ime akpụkpọ anụ ahụ. Ogo nke solubility na mmanụ na-eme ka ya ezigbo oke nke njikọ na nkịtị ogige eji na dermatological ngwaahịa karịsịa mgbochi ịka nká na ngwaahịa, ebe ọ bụ na mixtures na-yikarịrị na-anọ homogenous. Iji nweta zuru akụkọ gburugburu toxicological okwu, o kwere omume mmetụta n'ihi na ruo ogologo oge iwere na ihe ndị ọzọ, a palmitoyl tetrapeptide-7 E osụk n'okpuru afọ ofufo ịchọ mma Registration Program na 2012 maka FDA ihu ọma.
N'oge gara aga afọ ole na ole, nzukọ anyị etinye obi gị dum na gbarie ala-nke-na-art teknụzụ dokwara n'ụlọ na mba ọzọ. Ka ọ dịgodị, anyị enterprise mkpara a ìgwè ndị ọkachamara na-ewepụtara kwupụta uto nke Oke Nhọrọ maka ịchọ mma peptide/ Beauty peptide Palmitoyl Tetrapeptide-7 / palmitoyl Tetrapeptide Cas 221227-05-0, Anyị nwere ugbu a anọ na-eduga ngwọta. Anyị na ngwaahịa na-kasị dị irè na-ere bụghị naanị n'oge Chinese ahịa, ma nabatara n'oge mba ụlọ ọrụ.
N'oge gara aga afọ ole na ole, nzukọ anyị etinye obi gị dum na gbarie ala-nke-na-art teknụzụ dokwara n'ụlọ na mba ọzọ. Ka ọ dịgodị, anyị enterprise mkpara a ìgwè ndị ọkachamara na-ewepụtara kwupụta uto nke Palmitoyl Tetrapeptide-7, Cas 221227-05-0, Palmitoyl Tetrapeptide-3, Dị ka ahụmahụ emeputa anyị na-anabata ahaziri iji na anyị pụrụ ime ka ọ dị ka ndị gị picture ma ọ bụ sample nkọwapụta. Isi ihe mgbaru ọsọ nke anyị ụlọ ọrụ bụ na-ebi ndụ a na-eju afọ ka ncheta nile ahịa, na igosi a ogologo oge azụ ahịa mmekọrịta-azụ ma na ọrụ n'ụwa nile.